Haingam-pandeha azon'ny mpitaingina bisikileta Sprint? - Mark Cavendish
Tena > Mark Cavendish > Mariho haingana hafainganam-pandeha cavendish - Manual feno
Mariho haingana hafainganam-pandeha cavendish - Manual feno
Haingam-pandeha azon'ny mpitaingina bisikileta Sprint?
Ny hafainganana hafainganana mandritra ny làlana matihaninabisikiletasprint dia 63.9kph (53.7-69.1kph) tohanan'ny 9 ka hatramin'ny 17 segondra ho an'ny lehilahy, ary 53.8kph (41.6-64kph) ho an'ny 10-30 segondra ho an'ny vehivavy.
Eny, Pete, mila fanampiana aho. Um, afaka manao karazana haingam-pandeha haingam-pandeha aho, indrindra amin'ny familiana kodiarana, saingy tsia. Manohitra ny tena hafahafa.
Haavo hafa tanteraka io. Ka nataonay izany rehefa nivoaka izahay ary nandrakitra an-tsary dia samy nivezivezy izahay, mba hahitana toro-hevitra momba ny fomba ahafahako sy ny olon-drehetra mihazakazaka tsaratsara kokoa ary mivoaka izay inoako, 1800 watt, tampon'ny herinaratra ary eny. Ie.
Ary, eh, toa ny isaky ny miresaka aminao izahay dia fantatrao izay tokony hatao, ahoana no fomba anaovantsika izany? Mahitsy. Marina indrindra. Ka andao jerena ny haingam-pandeha haingam-pandeha.
Tena tsara ny fametrahana anao. Efa fantatrao ny ampahany tokony hataonao, fantatrao, ny tsingerin'ny herinao, fantatrao fa, um, ny angovo rehetra dia karazana voapetraka amin'ny bara sy ny valahanao. Um, ny fomba anaovantsika azy fotsiny? Uh, heveriko fa ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra mahatonga ny sprint anao dia ny fametrahana anao, eh, haingana loatra.
Tsy ianao, tsy miezaka mafy amin'ny fametrahana azy ianao. Azavao izany. Ahoana no fomba hanamboarana sprint? Ka karazana, eh, toa anao, eh, maka bara maty maty.
Fantatrao fa tsy miakatra fotsiny ianao, alao izy ireo, atsangano ambonin'ny vatanao. Mihantona amin'ny valahanao ianao, manisy vatofantsika ny zava-drehetra, mandray ny bara. Ary noho izany misy fihenjanana manerana ny vatanao, amin'ny tananao, amin'ny tananao sy amin'ny tananao ary amin'ny tratranao ary miverina ao amin'ny valahanao.
Ary avy eo dia alainao ny bar. Ie, tena handeha aho manomboka mipetrapetraka eo noho eo. Ka ny lazainao dia amin'ny fipetrahana.
Miakara, raiso ny toerana, afatory ny atiko, hidio ny zava-drehetra ary avy eo andramo ny hamandrihana ireo, raiso ny iray, ny sandry an-kavanana havanana, ary rehefa eo amin'io toerana io ianao dia vonona ianao, fantatrao fa afaka, afaka manazava fotsiny ianao ambony, toy ny mandrehitra afomanga, esorinao ny tananao, ary raha tsy manao izay hitanao aho dia manana ny valahako. Na izany na tsy izany, eh, goosebumps. Ie.
Izany dia toy ny decoupling eo aminao sy ny vodinao. Ary, um, eo izany, miaraka amin'ny vatofantsika miorim-paka toy izany, afaka mametraka hery be dia be ao anaty pedal ianao ary afaka misintona mafy ny vatanao avy eo am-pelatanana. Ie.
Ka efa niresaka momba ny toerana misy ny faribolana herinaratra isika. Ka amin'ny sandrinao sy ny fomba hidirany amin'ny takela-by roa sy ny fihenjanana amin'ny tratrako sy ny tendako, nefa miala amiko avy eo. Somary taorinan'ny tratrako dia eo daholo ny very hery.
Ie. Ie. Ary, ary ny zavatra tsapanay dia, um, raha ianao, ianao, dia manao asa lehibe misintona ny kitapom-batana, manetsika ny kiho, um, efa tafiditra ny tratra.
Um, saingy tsy dia nahantona ianao. Manantena aho, Um, ny lamosiko dia saika fisaka ary ianao, afaka mahita ny tratra ianao, mahita kely fotsiny ny eo aloha, ary, um, tsy manosika ny valahanao hiverina hanidy tsara ny pivot ary tazomy ny fototr'izany, um, sprint mandroso mandroso. Marina? Ny ankamaroan'izany dia misy ifandraisany amin'ny toerana ametrahako ny tanako amin'ny kodiarana.
Ka hitanao fa ambany loatra aho. Satria mieritreritra bebe kokoa ny hisintona an'i Pete aho dia miarina ianao ary mandroso tsara. Raha mihemotra ianao, ary mieritreritra an'izany koa aho, dia handray ny lapanao izany.
Satria tsara ny latabatrao, tokony ho henjana ary eny ny ankamaroan'ny fihodinanao, sa tsy izany? Tahaka ny lamosinao manontolo, um, ary tsy fantatray izany mandra-pahitanay ilay lahatsoratra, fa ny tananao dia tena teo amin'ireo fisotroana fisaka ireo, ary heveriko fa nilaza foana izahay fa misintona ny pedal anao, izay misy dikany izany no antony nitarihanao rehefa mijery ianao dia toa misarika ny valahako tokoa ny tanako. Um, tetikady hafa izany. Ie.
Um, zavatra iray hafa ny gadon-tsaiko manahirana ary heveriko fa IDID izany, hazakazaka hazakazaka. Ataoko fa tsy izaho irery no manao an'io. Ie.
Fa ianao dia betsaka kokoa, eh, onja misosa, toy ny gadona izay indraindray. Ho ahy izany, indraindray azoko ary indraindray tsy fantatro ny maha-zava-dehibe azy. Ie.
Ary ny fotoana angamba no zava-dehibe indrindra amin'ny ankapobeny. Um, izany no iray amin'ireo zavatra lehibe azonao p. Ny habetsaky ny herin'io hery io miditra amin'ny pedal sy ny kodiaranao dia mampandroso anao haingana. Mety ho 4000 watts, 4000 watts.
Very fotsiny izy rehetra ary ary ny fotoana dia mijery ny lahatsoratra, ny fotoananao, mitazona ny fotoana mety ianao indraindray. Ary tena hitanao ny fomba. Ny lahatsoratra dia manao asa lehibe handroso tokoa.
Ary avy eo ianao dia ho karazana very azy amin'ny kapoka pedal vitsivitsy manaraka. Ny ampahany sarotra dia ny fihenjanana avy amin'ny pedal rehefa miverina mihazakazaka ianao. Ka rehefa tonga ny fihenjanana ary mandeha dia misy toerana mamy izay tsy maninona.
Tsy mahay amin'ny faritra hafa aho. Ahoana no ahafahanao manamboatra izany? Izany dia zavatra roa. Uh, izahay, dia nahatsikaritra tamin'ity lahatsoratra ity fa ny sprint, eh, ny faharetan'ny sprint, dia manova ny zavatra rehetra, koa raha mihazakazaka ianao mandritra ny 10 segondra, ny segondra telo voalohany dia hafa noho ny telo segondra antonony, izay tsy mitovy amin'ny ireo dia tsy mitovy amin'ny telo segondra farany.
tsy maninona na amin'ny firy andro ianao amin'ny fampihetseham-batana
Ary araho maso ny fotoana sy. Toy ny fikororohana metronomika amin'ny bisikiletanao ary alao antoka fa ny vatofantsika dia miantsona avokoa, eh, miova ny fotoana ary miova ny hery, rehefa eo amin'ny toerana lavorary ianao ary miorim-paka daholo ny zava-drehetra, eh, tena manafaingana ny zava-drehetra ianao. Ary misintona amin'ny hery bebe kokoa amin'ny voalohany sy ny hery kely kokoa mandritra ny sprint.
Betsaka izany no zakaina indray mandeha. Eny, fa, eh, ny olona koa mety ho afaka manao fanazaran-tena, eh, amin'ny fitaovana kely kokoa hahazoana ny gadona. Marina.
Ary mandalo izany fitohizan-javatra izany. Marina indrindra. Ary, ary misaraka, manaparitaka sprint.
Ka ny tena segondra voalohany fotsiny dia manahy ianao. Marina. Toy ny hoe afaka mandanjalanja tanteraka ny telo segondra voalohany anao izahay, tsy mieritreritra ianao fa afaka manohy ilay fikorontanana rehefa mandeha ny fotoana Wear Sprint? Ie, um, andao indray hamerina azy io indray.
Ka ny tokony hataoko dia ny manangana sprint droite. Midira ary, hidio ny zava-drehetra, lokoy ny latabako, ny ivoko, ny lamosiko. Roa no mahazo ny toeran'ny tanako amin'ny fotoana izay isarihako ankehitriny.
Ie. Inona indray ny eo am-balahanao, marina? Toy ny tenanao, izany no lazainao sy ao aminao. Ary izao dia horaisiko amin'ny tananao ihany koa ilay tanana.
Ka raha midina ny kapoka ataoko ankavia dia hisintona anao tsara ny tanako havia. Tonga hatrany amiko. Miala tsiny fa aza misintona.
Ie. Ary ho voatanisa bebe kokoa ianao amin'izay ny vatofantsorinao dia ho afaka hisintona ny tananao ao anatin'ireo valahana ireo. Ho lasa aerodynamika kokoa aho ao.
Heveriko fa ny fambara ho ahy dia ny fampidinana ny kiho. Ie. Aondriho ny kiho ary atosiho kely ny volanao.
Jereo indray. Ny laselyo dia. Mijery lavitra kokoa izy, um, avy amin'ny tongony aoriana.
Toy ny hoe ny oronao avy eo amin'ny ilay lasely dia mikasika ny tadinao, na izany aza, io dia famantarana tsara foana. Midika izany fa efa tafaverina lavitra ianao ka mety ho fisaka ny lamosinao. Ie.
Ary ny manaraka dia ny fananana valahana mafy amin'ny swing swing ary angamba ny fampiharana eto dia tsy ezaka be izany. 80 90%. Eny, satria mbola tsy maintsy tsapanao ho toy ny haingam-pandeha fa aza atao mihazakazaka loatra ianao ary manorena Na ahoana na ahoana, marina.
Ary amin'ny fito 50% dia tsara ny sprint. Toy ny hoe tokony hanao be dia be ianao, sa tsy izany? Raha apetrakao amin'ny toerana mety ianao ary raha manome anao sprint 600 na 800 watt izahay dia azonao atao ny mamono azy ireo ary manao azy tsara. Ampianaro ireo lamina neuromuscular ireo izay hahafahanao manao izany amin'ny hafainganam-pandeha tanteraka.
Ie. Sarotra izany, heveriko fa betsaka ny olona tsy mampihatra an'io, ary sarotra ny mahazo an'io amin'ny hazakazaka haingam-pandeha, manao fanazaran-tena ary reraka ianao ary matahotra ianao, na goavana ny adrenaline, eny, ka zavatra hafa no nitranga teny an-dàlana ary, eh, tena nahasosotra ahy izany, fa ny ahy kosa nisolosolo, oadray, nibolisatra ny rojo am-pandehanana. Um, namonjy azy ianao.
Namonjy azy aho, saingy, eh, sarotra ny mamiravira izao. Um, manahy ianao, marina? Um, izaho, heverinay fa toa namoritra ny rojo vy teo aloha aho rehefa nanao an'io. Ary nanao, eh, nanao fampihetseham-batana ambany, hery mahery vaika izahay.
Tsy dia mamporisika mafy ireo fanazaran-tena ireo aho izao, um, heveriko fa tokony ho azoko antoka izao fa hiala amin'ny a, um, RPM avo kokoa amin'ny ambany, um, wattage. Toy ny tamin'ny 53 11. Toy ny nanandrana nitantana azy aho ary niondrika.
Ie. Miezaha manenjana ny famoronao, ny sandrinao ankavanana. Ie.
Mitranga ny raharaha. Um, fa hoy aho raha vantany vao esorinay ireo zavatra vitsivitsy ilainao, tsy andriko ny hivoaka indray hijery izay mitranga. Raisinay ny 1500, 1500 mandritra ny dimy segondra.
Izay ny tanjona, marina? Izay no tanjona. Ary dia nitranga izany. Eritrereto hoe firazanana firy no handresenao betsaka noho izaho izao.
Misaotra Pete. Eny tokoa. Nate aho ary Pete.
Ary raha tianao ity lahatsoratra ity dia omeo thumbs up izy. Raha tsy tianao izany dia omeo ankihibe izy. Raha te hahita azy bebe kokoa amin'ireo lahatsoratra ireo ianao dia aza hadino ny misoratra anarana.
Ary raha te-ho tonga bisikileta haingana ianao dia zahao ny Trainerroad.com. Iray roa telo efatra.
Manambara ady ankamantatra aho. Lava loatra ny anao.
Hafainganam-pandeha Peter Sagan?
Mpitaingina toaPeter Saganary i Greg Van Avermaet dia nahatonga ny karierany hiavaka amin'ny fanasaziana ny làlana toa ireny. Amin'ny sehatry ny henjana dia 22 ka hatramin'ny 24 mph no salanisan'izy ireo.
Ity no bisikileta hiara-dohan'i Pete Sagan, legendary, amin'ny Tour de France 2019. Izy io dia ny valiny manokana momba ny S-Works Venge. (whooshing) (mozika dingana dub) Nandritra ny asany voalohany i Pete Sagan dia nanomboka ny dingana voalohany tamin'ny Tour de France tamin'ny alàlan'ny fitaovana Bora-Hansgrohe mahazatra, na dia teo aza ny fehin'ny avana tamin'ny faran'ny tanany ny zava-misy fa tsy tompon-daka eran-tany intsony izy, Alejandro Valverde dia nandresy tamin'ny taon-dasa, ary tsy tompon-daka nasionaly intsony izy satria Yuri rahalahiny dia vao herinandro vitsivitsy lasa izay.
Saingy mazava ho azy fa tsy midika izany fa tsy manana bisikileta mahazatra izy satria iray amin'ireo tompon-daka lehibe indrindra tamin'ny fanatanjahantena. Ka S-Works sy Specialised no nanao an'ity taona ity. Somary somary malefaka kokoa noho ilay natolotr'i Jon Cannings anao tao amin'ny Tour de France tamin'ny taon-dasa izay nisy an'io mamirapiratra maitso io.
Mbola manana ny manjelanjelatra, fa amin'ny volondavenona manjavozavo kokoa, ary miditra ao anaty volondavenona matte izy io ary miverina eto ambany hatrany. Ankehitriny dia tsy manao izany bisikileta pro izany intsony aho ho an'ny lahatsoratra. Avelako any amin'i Jon Cannings izay manam-pahaizana kokoa amin'ny teknolojia sy i Angry Lou tenany izany, i Ollie Bridgewood, saingy matetika no potika aho raha manao iray amin'ny tsy fanaovana ny Free Hub Sound Test, ka ho hitako eo am-baravarana voalohany izany.
Vonona, andao handeha. (Milomano ny kodiarana ary tsindrio haingana) Ilay zavatra hafa itsikerana ahy dia ny tsy fanitsiana azy, ka lasa ianao. (Mitsoriaka ny kodiarana ary mifikitra haingana kokoa) Marina izany, ampy izany.
Ary ankoatry ny glitter, izay nolazaiko fa tena tsara amin'ny tara-masoandro belza amin'izao fotoana izao, misy ihany koa ny sombin-kevitra vitsivitsy momba ity bisikileta natokana ho an'i Sagan ity. Mazava ho azy fa eo amin'ny fantsona ambony eto ny anarany. Izy koa dia manana ny lohateniny eo alohan'ilay fantsona ambony raha mbola eto izy, mitovy amin'ny tamin'ny taon-dasa, raha ny marina dia manana ny fandresena telo azony tamin'ny Tompondaka Erantany.
Nandresy izy ireo, mazava ho azy. Richmond ny 2015, Doha ny 2016 ary nandresy izany izy tao Bergen, ary sahiko ny milaza fa tsy ho ela dia handresy ny manaraka izy, ary mila manampy ampahaefatra eto aho. Ity kinova an'ny Venge ity dia navoakan'ny Specialised talohan'ny Tour de France tamin'ny taon-dasa, ary nampiasain'izy ireo ilay kinova maitso izay nasehon'i Jon Cannings anao tamin'ny taon-dasa, ka tsy hasiako antsipirihany loatra ny fampitahana azy ireo tamin'ny nataon'ny Predensialors azy ireo. , fa hazakazaka fohy ihany.
Vitan'izy ireo ny nanao azy ireo ho aerodynamika kokoa tamin'ny alàlan'ny fitsapana ny tonelina. Maivana mihoatra ny 200 grama ny endriny noho ny teo alohany. Milanja 25 grama ny fork, ary eo am-pelatanana, izay hidirako ao anatin'ny fotoana fohy, nitahiry 100 grama mahery izy ireo, izay be dia be.
Toy ny tamin'ny taon-dasa, raha misafidy bracket ambany misy kambana CeramicSpeed ​​aho fa tsy mifanentana amin'ny gazety dia heveriko fa satria azo itokisana kokoa izy io. Raha miresaka ny fahamendrehana, amin'ny bisikileta dia misy vondrona Shimano Deore HDI-2 efa ho feno ao ambadiky ny kodia, izay hahatongavako kely kelikely. Atombohy eto ny cranks eto. 172,5 milimetatra ny halavany nandehanany, saingy misy rohy nify 54 sy 42 eo amin'izy ireo.
Tsy dia mahazatra loatra hoy aho, na dia mahita sprinters mihombo hatrany mihazakazaka gadra 54-nify aza ho an'ireo dingana mendri-piderana. Chainrings dia manana ity mpitazona rojo K-EDGE ity izy mba tsy hianjera ary hahatratra ny faran'ny ambany. Ao aoriana no misy ny cassette -n'ny dingana haingana 11 ka hatramin'ny 28.
Mazava ho azy fa hiova izany mandritra ny Tour de France, toy izany koa ny bisikiletany, satria afaka miditra amin'ny S-Works Tarmac manokana ho an'ny dingana havoana koa izy. Ary, zavatra iray be dia be no nanehoanareo hevitra momba ny bisikileta mpanafika tamin'ny taon-dasa avy any S-Works Vengewas an'i Pete Sagan dia ny zava-misy fa ny metatra manokana 4iiii dia volomboasary mamirapiratra, ary heveriko fa nihaino anao izy ireo noho izany izao mainty misimisy kokoa izay heveriko fa mandeha amin'ny sisa amin'ny bisikileta amin'ny alàlan'ny tsorakazo Aerofly sy ny tohany, ary io fotony io dia karavasy. Norefesiko fotsiny ary tamin'ny kajy nataoko dia 14.5 'santimetatra avy eo afovoan'ny tampon-damosina ka hatrany afovoan'ny hazomandry.
Raha miresaka paosin-tanana dia mirefy 42 santimetatra izy ireo, afovoany mankany afovoany, amin'ny faran'ny rano mitete any. Izy koa dia manana ny leveram-pitaovana satelita amin'ireo setroka ireo mba hahafahany manova fitaovana rehefa mihazakazaka ao anaty rano. Ary avy eo eo aloha dia eo ny Wahoo ELEMNT BOLT eo aloha, izay singa tokana ihany izay miverina mankany amin'ilay fotony.
Tiako izany. Saika ny tariby rehetra amin'ity bisikileta ity dia tsy hita maso afa-tsy vitsivitsy eto izay mivoaka avy eo am-pelatanana ary eo ambanin'ny fotony dia mankanesa eto ary miditra amin'ity efitrano fandraisam-peo ity izay midina ao anaty rindrina. Ny zavatra hafa tena tsara momba ity bisikileta ity dia ny miafina ny boaty Di2 fihaonana.
Tsy eo akaikin'ilay fotony, fa eo amin'ny tsanganana seza aero ao aoriany. ka zara raha mahita azy ianao. Ao an-tampon'ity seza misy seza ity dia misy S-Works Roma ao amin'ny lasely EVO miaraka amin'ny lalàm-by karbonika FACT.
Haavon'ny lasely? 76 santimetatra, mihoatra kely, manomboka eo afovoan'ny fononteny ambany ka hatrany amin'ny tendrony eto. Ary ankehitriny mitondra fiara 56-centimetatra izy, izay mazava ho azy fa tsy niova nandritra ny fotoana elaela. Maro ny mpitaingina pro, araka ny fantatsika rehetra, no hampihena ny refin'ny habeny.
Ny aerodynamika bebe kokoa fotsiny ary koa mba hahazoana henjana kokoa. Saingy bandy goavambe tsara tarehy tokoa izy, nihaona taminy taorian'ny fampiofanana nataony ary nanamarina ny statistikany. Iray metatra 84, mihoatra ny 6 metatra kely izay.
Tonga amin'ny bisikileta avy amin'ny marika manokana trano Roval izahay. Ilay iray amin'ny bisikiletany, izay ny kodiarana nohaniny, miaraka amina laharana faharoa ao aoriany, dia ny mombamomba an'i CLX 64, ary eo amboniny dia misy kodiarana tubo S-Works turbo miaraka amin'ny GRIPTON compound nitaingina. Tsy dia hitako ny habeny eto, fa amiko toa 25 milimetatra izy ireo.
Araka ny hitanao tsara dia mitaingina freins amin'ity sety ity i Sagan. Tsy any dia manana rotor 160 milimetatra avy any Shimano isika, 140 fotsiny no any aoriana, ary samy calipers lemaka avokoa izy roa. Mieritreritra ihany koa aho fa niresaka ireo pedal.
Mitaingina an'i Shimano Dureos koa izy. Ity no kinova R9100 izay vaovao indrindra. Izy koa dia manana tavoahangy Tacx sy cages.
Ny refy tsy mbola nomeko anao dia ny fahatongavany, hatrany amin'ny tendron'ilay lasely ka hatrany afovoan'ny anjomara ary nomena io fijoroana goavambe io, dia lavitra tokoa izany. Vao nandrefy 62 centimetatra aho. Lehilahy goavambe izy, saingy mihinjitra be izany.
Eny ary, izao nomeko anao izao ny lanjan'ilay bisikileta, saingy indrisy, i Ollie Bridgewood dia nangalatra ny refin'iko androany maraina hanangana môtô pro azy manokana ka tsy haiko ny manome ny lanjany. Fantatro fa 7.46kg izy tamin'ny taon-dasa ary heveriko fa mety ho maivana kely kokoa izy ity satria toa misy loko kely kokoa nefa izany no hitranga.
Mahaliana ny mahita hoe mandra-pahoviana vao handresy ny dingana voalohany ary haharitra hafiriana izy vao manao jersey maintso. Heveriko fa ho hitantsika izay tena nanoratany teto teo ambanin'ny faritra ambany fonosana etsy ambany, ary raha tsy ampy anao ny andro Tour de France anao, dia eo indrindra ny lahatsoratray.
Haingam-pandeha ny mpitaingina Tour de France?
SPRINTS.Rahovianamamely ny fonosana asprintvita, ioafakamatetika mamono ny hafainganam-pandeha mihoatra ny 40mph. Raha ny marina, ny angon-drakitra Andreva nampiakarin'i Andre Greipel avy amin'ny dingana 5 dia nampiseho fa tsy maintsy namely 43,5mph (70km) izy mba handresena.16. 2015.
Efa nipetraka tao an-trano ve ianao ary nijery ny Tour de France ary ahoana no fomba nifohazan'ireo mpitaingina haingana ireo? - Azoko antoka izany. Soa ihany fa manana traikefa kely hizara aminareo koa izahay. - Ooh, eny ataontsika izany. (mozika elektronika milamina) - Raha te hihanika toy ny osy an-tendrombohitra ao amin'ny Tour de France ianao dia mila miaina isan-tsegondra isan'andro isan'andro ary mifantoka kely ao an-dohanao.
Miakatra ambony, haingana.- Eny, tokony hampamoahina ianao isaky ny misy anao, tsy afaka mipetraka ianao ary mifikitra amina sôkôla goavambe amin'ny volana febroary toy ny tiantsika rehetra hatao, ary avy eo te-hiakatra haingana any Jolay. Heveriko fa sprinter amin'ny lafiny sasany, olona kely kokoa? Raha mifantoka amin'ny fiakarana haingana ianao dia afaka miala amin'izany fihetsika izany.
Fa raha te handeha haingana any amin'ny Tour de France ianao amin'ny volana Jolay, dia tokony ho tompon'andraikitra amin'izay manaikitra rehetra izay aloaky ny vavanao ianao. Ary toy izany koa ny hetsika rehetra ataonao. Ny fihetsika rehetra dia misy fiantraikany eo amin'ny vatan'olombelona.
Ohatra, alao sary an-tsaina hoe mipetraka amin'ny rihana fahatelo ianao ao amin'ny lavitry ny trano ary mitondra fiara miakatra sy midina farafahakeliny indroa isan'andro. Dingana 28.800 izany alohan'ny nahatongavanao tany amin'ny Tour de France. Ka tsara kokoa ve ny mitondra ny ascenseur aorian'ny fiofanana mandritra ny fito ora mahery? matihanina Tour de France.
Raha niresaka sakafo aho dia nisy mpiara-miasa amiko izay tsy nihinana afa-tsy voan-kazo sy rano nandritra ny tapa-bolana talohan'ny hazakazaka lehibe. Tsy mahasalama tokoa ny manana sakafo voafetra toy izany, saingy nahavita izany haingana izy. - Oats sy rano? - Ie, saro-kenatra. - Mampivarahontsana ny feo.
Raha miakatra ny Col Madeleine izaho sy i Chris dia miakatra izany. Ka mety fotoana mety hilazana amin'ny tenanao kely momba ny fiofanana momba ny haavony. Ny fiofanana momba ny haavon'ny toerana ambony dia nitombo tamin'ny lazany tato anatin'ny taona vitsivitsy, Tour Proshave dia nanandrana karazana lasy avo lenta, na fiofanana momba ny haavon'ny toerana avo, tamin'ny fotoana iray nandritra ny asany. - Ankehitriny ny torimaso dia ny hatory ambony ary ambany ny fanazaran-tena.
Raha ny tena izy, rehefa matory amin'ny toerana avo isika, rehefa miaina ny rivotra tsy misy oxygen, ny vatantsika dia voatery mizatra amin'ny alàlan'ny famokarana sela mena bebe kokoa izay mitondra ny oxygen any amin'ny hozantsika, izay fototry ny fampisehoana aerôbika. Ary eny, afaka manao fanitsiana mitovy amin'ny fampiononana ao an-tranonao ianao amin'ny fampiasana efitrano hyperbaric na tranolay avo lenta, ary misy fanamafisana bebe kokoa amin'ny fandehanana any amin'ireo toerana lavitra ireo. Izany dia satria mazàna tsy dia variana loatra ny atleta, midika izany fa afaka mifantoka amin'ilay asa an-tanana izy ireo.
Sarotra amin'ny haavony izy, sa tsy izany? - Haingam-pandeha toy izao - Ny fiofanana amin'ny haavo dia tsy an'ny olon-drehetra ary azo antoka fa afaka maka fotoana kely vao zatra, fa ny mpitaingina kosa dia voatonona nilaza fa fampitomboana ny tanjaka maharitra hatramin'ny 10%. Izay mazàna maharitra roa taona na mahery vao vita. Na izany aza, mpamaly ambony ireo, ary tsy toy ny tombony ara-batana mahazatra, tsy maharitra mandrakizay ireo.
10 ka hatramin'ny 20 andro fotsiny izay midika hoe haavon'ny dia hafa iray no ilaina - Na manao ahoana na manao ahoana fahaizanao amin'ny maha bisikileta amateur anao, ny fiakarana haingana toy ny Tour de France pro dia tsy mitombina fotsiny noho ny antony tsotra iray. Hanana lohandohany ianao.- Eny, ny aerodynamika dia amin'ny hafainganam-pandeha maharitra 20 kilometatra isan'ora manampy amin'ny fiakarana.
Tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny hafainganana izy, fa manampy amin'ny fampitomboana ny hafainganana amin'ny fiakarana. Rehefa lasa ny mpamily tsirairay, mihazakazaka haingana ny hafainganana ary ny mpamilinao any aoriana afaka mijanona ao anaty kodiarana raha mbola azo atao. Eny, mihobia, ry sakaiza! - Mety hanontany tena ianao izao fa izay mipetraka amin'ny bisikileta dia azo antoka fa handray soa amin'izany.
Fa tsy marina izany. Matetika curvy sy teknika ny tendrombohitra noho ny antony. Midika izany fa ny mpamily voalohany dia mamakivaky ny fiolahana, manafaingana kely ary io vokatr'izany dia manamafy ny vondrona aoriana.
Izany dia nilaza fa rehefa miala eo an-joron'ilay mpitaingina laharana 10 dia hihazakazaka hihazona ny kodiarana izy ireo na ho rovitra ny fingotra ary hamela ny kodiarana mandritra ny fiainana izy ireo, hihinana tsara ary hikarakara ny paikadinao sy ny toeranao rehetra, tonga lafatra fotsiny mandehana amin'ny hazakazaka. Saingy mbola misy zavatra manakana anao - ary izany no génétique misy anao! Ny mpamily sasany dia fanakorontanana fotsiny. Afaka manodina oksizenina bebe kokoa ary mamokatra herinaratra bebe kokoa amin'ny fotoana iray, na dia mahomby kokoa noho ny hafa aza isika - ary ireo lehilahy ireo no fonosana feno.
Manana ny hamafin'ny saina sy ny fahaizan'ny vatana hanohana azy koa ianao. Tsy rariny fotsiny - Mety handeha hody koa aho izao, hoy aho. - Ie. - Na inona na inona ataon'ny orinasan-tserasera na ny sakaizanao ao an-trano hinoanao, ny bisikileta dia fanatanjahan-tena madio kokoa noho ny tamin'ny 20 taona lasa.
Tamin'izany fotoana izany, ny hafainganana azon'izy ireo nitaingina bisikileta izay tsy maintsy nitaingenan'izy ireo dia tena nahatalanjona tokoa - ny antony nahatonga izany dia ny fanaovana dopage fotsiny. Heveriko fa raha te hiakatra toa ny Tour de France pro ianao 20 taona lasa izay, dia mila mahazo «booux de stimulant» sy «stimulants» avy any Chopson-nareo, ary izany no zavatra izay tsy mazava fa tsy amporisihinay. Ary ny fanadihadiana dia naneho fa tsy afaka mamadika ampondra ho racehorse ianao.
Ka heveriko fa tsy handany ny fotoananao toy ny Tour de France pro aho. - Raha nankafizinao ity lahatsoratra ity dia omeo ankihibe izy. Raha mila torolalana bebe kokoa dia kitiho ny Orbea malalako.
Misy antony ve hijoroanao eo an-tampon'ny havoana? - asaivo mijery lava aho (misento i James)
Inona no hafainganam-pandehan'i Mark Cavendish?
nyhafainganam-pandeha ambony indrindra, 70.2km / h, mety ho ny fahefatra farany haingana indrindra tamin'nyambonyquartet an-tsehatra, fa ny fampifangaroana ny M-rk? v's lead-out aryCavendish'sFahalalana haingam-pandeha dia mihoatra ny ampy handoavana ny mpifanandrina aminy indray.1. 2021.
Eto amin'ny GCN dia nanao lahatsoratra vitsivitsy tao amin'ny Paston momba ny fomba hivezivezena tsara izahay, ao an-tsaina fa na i Si, Matt ary Lasty aza tsy afaka namily ny ainay rehefa nahafantatra tsara ny zavatra nataony izahay .. .
Hihaona amin'i Mark Cavendish dia hanome torohevitra 5 ho an'ny sprinters izy. Marina, laharana 1
LOHAHEVITRA: SADY HATSARANA NY DISTANIA - AZA ATAO MAINGA ALALANA! Raha mandeha 250m isika dia 12 segondra, mety fantatrao ve? Mety ho lava kokoa ho an'ny mpankafy ianao ka tsarao ny halaviranao Tsy momba ny wattage faran'izay farany anao izany satria hitombo ny fahombiazanao, fa mandritra ny hafiriana no ahafahanao mihazona io wattage avo io ho an'ny sprint iray manontolo, fantatrao ? Ho fantatrao ary tsy maintsy hampiofana azy ianao. Fa aza mandeha aloha loatra - mora ny mandeha maraina rehefa mahita ny tsipika fahatongavana ianao ary na dia mety hahazo fampisehoana ambony aza ianao raha maty ianao dia ho very haingana noho ny hafa LOHATENY: FIDIO NY GEAR marina 2, safidio ny fitaovana mety indray Nampiasainay ny 53 na 54 miaraka amin'ny 11 fantatrao fa fitaovana lehibe hivezivezena eo io. Tena mila mifikitra aminy ianao, tsy dia mampiasa 54 loatra aho satria mitaingina cranks fohy kokoa dia mahazo ny hafainganam-pandehan'ny tongotro. Gear, tsy maintsy alainareo ny fitaovana, tsy vitan'ny fitaovam-piadiana goavambe fotsiny izany fa sprinter, hainao? Izany rehetra izany dia ny fidinana an-dalambe sy ny fanafainganana, ary toy izany koa ny fisafidianana ny fitaovanao alohan'ny hanombohanao ny sprint. Tsy te hifindra eo afovoan'ny sprint izy ireo satria, very ny herinao avy eo rehefa mifamadika ianao, very ny herinaratra sy ny tselika avy amin'ny pedal LOHATENY: ATAONAO NY TRANO ANAO Amin'ny sprint faobe vantany vao manomboka ianao, vantany vao misafidy ny fotoana alehanao ianao dia tsy manafoana azy, mandeha ianao, ary izany no izy, tsy misy hafainganam-pandeha? Tsy misy hafainganam-pandeha amin'ny haingam-pandeha, ezaka izany ary araka ny nolazaiko, rehefa vita ny enti-modinao ary fantatrao izay azonao atao sy amin'ny toe-javatra toy inona - miakatra, fidinana an-doha na tailwind, fantatrao hoe hatraiza ny halavanao alohan'ny handehananao. ny sakafo TITLE: mitondra ny bisikiletanao amin'ny tongotrao isa 4 marina fa mahita bisikileta be dia be ianao ary rehefa mihazakazaka izy ireo dia mandeha ary mamoaka anao fantatrao? Ary izany dia satria mampiorina ny tongony amin'ny pedal toy ny fianihana ry zareo.
Raha ianao izany Rehefa mihanika ianao, dia mahazo ny tongotrao ambonin'ny tampony sy amin'ny pedal, fantatrao? Rehefa mihazakazaka ianao rehefa mahatsapa fa mahomby ary mahatsapa ho very hery. Hitako fa mahomby kokoa hatrany ny mitondra ny bisikileta amin'ny tongotrao, raha toa ka misy dikany Ka mampiasa ny sandrinao ianao ary mitaingina ny bisikiletanao fa tsy mitondra ny tongotrao amin'ny bisikileta dia efa nahita hadisoana telo aho ' nanao nandritra ny 10 taona tsara! LOHATENY: TONGA LOWRIGHT, farany, tendron'ny laharana faha-5 ho an'ny sprinters vao manomboka rehetra, heveriko fa izany no tena itiavako azy, ary izany no mijanona ho ambany, mba ho marina, nataoko foana io. Tsy haiko raha noho ny hazakazakazakazaka na noho ny tongotra fohy sy lava ny halavako, saingy hitan'i Caleb Ewan ny halehiben'ny alehany dia hadalana ary misy tombony aerodynamika goavana any, fantatrao? Raha toa ianao ka izany dia tena manidy ny lavaka eto ianao raha oharina amin'ny sprint toa an'ity.
Ny lavaka lehibe, ilay lavaka be banga mampiditra ny rivotra. Ka mijanòna ambany dia hihazakazaka ianao. Marina izany, noho izany, torohevitra 5 ampiasainareo rehetra hivoatra haingana ao amin'ilay haingam-pandeha mba hahazoanao fandresena bebe kokoa na valiny tsara kokoa.
Hosedraiko izao ary ho hitako ny zavatra tsapako. Apetrako ao anatin'ity haingam-pandeha ity daholo ny toro-hevitr'i Marka, ka raha mandeha aho dia mandehana. Fitaovana havanana, mijanona ambany, 3, 2, 1.....
Noteneniko ianao mba hijanona ambany, mijanona ambany! Marina izany, mety ho tsara kokoa amin'ny fampiharana ny toro-heviny noho ianao ianao. Etsy ankilany, raha mila toro-hevitra fiakarana ianao dia ny tsindrio etsy ambony dia ho hitanao i Matt miresaka amin'i Alberto Contador. Ary raha mbola tsy hitanao ny tafatafa niarahana tamin'i Mark dia afaka mahita an'ity ianao, eo ambany pejy fotsiny, ary tsindrio eo afovoany mba hisoratra anarana, misy toro-hevitra tsara be dia be koa ao.
Ahoana no fandehanan'ny mpitaingina bisikileta haingana be?
Fa ny fomba lehibe hafaizany bisikileta matihanina izanymandehana beHaingankainganafa tsy ny sisa amin'ny hazakazaka toy ny Tour de France no fahaizan'izy ireo amin'ny fandrafetana na ny fivezivezena.izanyeo no amaritahan'izy ireo 'amin'ny kodiarana' an'ny mpitaingina eo alohanytoy izanyizy ireodiavoaaro amin'ny fanoherana ny rivotra sasany.iraika amby roapolo . 2018.
Fa maninona no voarara ny Supertuck?
Noho izany, ny filan-kevi-pitantanana amin'ny bisikileta, ny Union Cycliste Internationale (UCI), dia nanapa-kevitra ny hampihatrafandraranaamin'ny 'supertuck'toeran'ny bisikileta ao amin'ny pro peloton satria milaza izy ireo fa mampidi-doza ho an'ny mpitaingina sy ny mpitaingina eo akaiky eo izany.
Peter Sagan ve no tsara indrindra?
Sagandia heverina ho iray amin'ny bisikiletaindrindratalenta, nahazo fandresena be voninahitra, anisan'izany ny Tompondaka Erantany nisesy, Tompondaka eropeana iray, dingana roa ParisNice, dingana TirrenoAdriatico fito, iray amin'ny Tour de Romandie, telo ary ny sokajy ankapobeny amin'ny Tour de Pologne, a
Mandoto tena ve ny bisikileta?
Androany, mpanao fanatanjahantena sangany no hanaopoop ny patalohaary mitohy. Ataovy ao an-tsaina izay mitranga rehefampitaingina bisikiletydia voaterypoop ny pataloha. Ireo matihanina dia mifaninana amin'ny toe-javatra izay tsy takatry ny saina ny vatany fa mahatsiaro ho faty izy io.iraika amby roapolo . 2015.
Inona no hafainganam-pandehan'ny Usain Bolt?
Tamin'ny hetsika nandresen-dahatra,Usain Bolt'stany antononyhafainganam-pandehadia 37.58km / ora, raha mahatratra ahafainganam-pandeha ambony indrindraan'ny 44.72km / ora amin'ny isa maharitra 60-80m mety ho an'izao tontolo izaohaingana indrindralehilahy. Sprinter JamaikanaUsain Boltdia raisina ho toy nyhaingana indrindralehilahy eto ambonin'ny planeta.
Mbola mitaingina ihany ve i Mark Cavendish?
Mark Cavendishtafaverina ao amin'ny Tour de France. Raha jerena ny tolona nandalovany tato anatin'ny taona vitsivitsy, zava-bita mahatalanjona izany - ary ny iray toa tsy azo inoana toy ny zazalahy avy amin'ny Isle of Man nandresy dingana 30 tamin'ny hazakazaka am-bisikileta lehibe indrindra.26. 2021.
Firy segondra i Mark Cavendish amin'ny sprint?
Io karazana fahefana io dia eo anelanelan'ny 5-30 segondra, ary azo inoana fa 5 segondra farany ambony, na mitanisa ny tampon'ny tampony izay navoakany. Misy famakafakana tena mahaliana an'ireo mpitaingin-tsoavaly maro an'ny Team Columbia taona roa lasa izay rehefa nandresy tamin'ny sehatra i Cavendish.
Firy ny watt azon'ny Mark Cavendish avoaka amin'ny hazakazaka?
'Ny ankamaroan'ny olona izay milaza fa ny faratampony dia 1.600 watt dia tsy hamoaka 1.600. 1.580 ny ambony indrindra amiko, ary be izany. Tsy betsaka ny lehilahy hanao mihoatra ny zato mihoatra izany. Saingy tsy hisy olona hanakaiky an'izany amin'ny hazakazaka aorian'ny 200 kilometatra, 'hoy hatrany izy. 'Nametraka 1.490 androany aho tamin'ny fampiofanana, amin'ny endrika ratsy, saingy tsy hamoaka izany amin'ny hazakazaka iray aho.
Taiza no namaranan'i Mark Cavendish tamin'ny Tour de France 2016?
Nanohy ny dingana fahefatra tamin'ny Tour 2016 i Cavendish, ary ny fandreseny tamin'ny dingana faha-30 an'ny Tour, teo amin'ny Stage 14, namarana an'i Alexander Kristoff sy Sagan hatramin'ny farany tao Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux. Niala tamin'ny Tour izy tamin'ny andro fitsaharana faharoa alohan'ny dingana be tendrombohitra, nitanisa ny filàny hiomanana amin'ny Lalao Olaimpika Rio.
asio solomaso misy cavendish
Marka solomaso cavendish - ahoana no fomba hahatratrarana
Inona no solomaso anaovan'i Mark Cavendish? Mark Cavendish Manao Sunglass an'ny Oakley Jawbreaker. Mark Cavendish dia mpitaingina bisikileta manam-pahaizana anglisy.
Bisikileta cavendish - fanontaniana mahazatra
Mbola ao anaty Tour ve ny Cavendish? Mark Cavendish dia tafavoaka tamin'ny fotoana tapaka tamin'ny dingana 11 tamin'ny Tour de France 2021, saingy tsy nahavita ny farany i Luke Rowe.3
marika haingana hafainganam-pandeha cavendish
Haingam-pandeha azon'ny mpitaingina bisikileta Sprint? Ny haingam-pandeha mandritra ny hazakazaka bisikileta manam-pahaizana dia 63.9kph (53.7-69.1kph) maharitra 9 ka hatramin'ny 17 segondra ho an'ny lehilahy, ary 53.8kph (41.6-64kph) mandritra ny 10-30 segondra ho an'ny vehivavy.
asio marika oakleys cavendish
Marka cavendish oakleys - vahaolana vaovao
mariho haingana hafainganam-pandeha
Marka haingam-pandeha ambony cavendish - Manual tanteraka
Inona no hafainganam-pandehan'ny mpitaingina bisikileta matihanina? Tour de France 2019 amin'ny isa | Azonao atao ve ny maminavina ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha? Hafainganana voarakitra an-tsoratra: 101.5kph (63.1mph) Haingam-pandeha miakatra: 20.6kph (12.8mph) Isan'ny dingana azon'ny mpandresy tamin'ny ankapobeny: 0.30. 2019.
manamarika fianjerana cavendish
Marka fianjerana cavendish - ny fomba hahatratrarana
Fa maninona no naongana i Mark Cavendish? Nandresy tamin'ny dingana fahenina tamin'ny Tour de France i Mark Cavendish satria nametraka fitoriana tamin'ny mpankafy izay niteraka fianjerana be ny mpikarakara. Toerana hilalaovana na hiatoana, M hamonoana, zana-tsipika havia sy havanana hitadiavana, zana-tsipika miakatra sy midina ho an'ny volume.01.07.2021